OpenSUSE Leap 42.1: Yekutanga "Mbeu dzakauchikwa" Kugovera | Kubva kuLinux
OpenSUSE Leap 42.1: Iyo Yekutanga "Mbeu dzakauchikwa" Kugovaniswa
Linuxero | | Applications, Kugoverwa, GNU / Linux, Yakurudzirwa, Networks / Maseva
Mushure megore rekumirira mushe mushe vhura, pakupedzisira kuvhurwa kwe svhuraSUSE Leap. Kutenda neshanduko muitiro wekuvandudza wekugovera uku, vanosimbisa kuti ndizvo mugove wekutanga chemasanganiswa Linux.
Kusvetuka kwakagadzirwa kubva kunobva masosi e SUSE Linux Enterprise (SLE), iyo inovimbisa nharaunda isina kumboitika yekuchengetedzeka uye kugadzikana, ichibatana neCommunity Community yekupa kubatana uye kuvimbika kune vese vashandisi uye vanopa. Nekugovana SLE sosi, yakavhurikaSUSE Leap, iwe unozobatsirwa kubva mukuchengetedza uye kusimudzira kunoitirwa SUSE Linux EnterpriseIvo vanozotogovana mamwe mapakeji uye zvinyorwa; zvakasiyana zvachose neshanduro dzekare dzekuvhuraSUSE, uko kwaive nemitsara yekuchengetedza yakasarudzika pakati peiyo Open uye Enterprise shanduro.
Iyo yekusimudzira nharaunda zvakare ine yakaringana inomiririra nhanho yemupiro, sezvo ichave iri pamusoro pekugadzirisa uye kugadzirisa mapakeji ari mune yakakura uye yakatsiga chinzvimbo mune inotenderera kuburitsa distro vhuraSUSE Tumbleweed.
VhuraSUSE Tumbleweed uye Leap
Izvo zvakakosha kuratidza nzira nyowani iyo inoratidzwa mune yakavhurikaSUSE Leap 42.1, distro ine kugadzikana uye kuchengetedzeka kweiyo kambani asi nekugona uye vanguard yenharaunda kuburitsa kuburitsa. Kubva danho rekusimudzira reLeap, timu yaro yekugadzira yakataura izvozvo iro dambudziko hombe rave rekutarisa kuti yakawanda sei SLE uye kuti yakawanda sei Tumbleweed yaidiwa kuLeapNhasi tinogona kuongorora mhedzisiro yechikwata chakadai chine tarenda.
Pakati pehunhu hwayo isu tine:
Yakakwana chiyero pakati pezvitsva uye zvitsva uye vakura uye vakagadzikana. Kusvetuka kunopa Enterprise kunzwa, asi nerutsigiro rwechizvino Hardware. Nesarudzo yakanakisa yemapakeji akagadzikana (akaderedzwa zvishoma) mune akanakisa LTS maitiro, asi neshanduro dzichangoburwa dzeKDE Plasma 5 uye LibreOffice 5, uye Gnome 3.16 pamwe neGCC 4.8.5, nesarudzo yekushandisa GCC 5.2.
LibreOffice 5 paGnome 3.16
Kukura kukuru kwekuita kwemafomati efaira BTRFS y XFS. Kunyangwe uchikwanisa kusarudza mamwe mafomati. Nekushandisa BTRFS, vashandisi vanozokwanisa kutora mukana we Snapper, chishandiso chekugadzira yakarongwa maSpyshshots ekugadzira system backups, zvakare inopa mukana wekuti utore mufananidzo uye kugona kuwana iyo system kunyangwe paine mafaira.
Akawanda mhinduro dze Virtualization: QEMU 2.3.1, VirtualBox 5.0.6 uye Docker 1.8.2.
Yakawedzerwa YaST: Kukwakuka kunosanganisira iyo chaiyo vhezheni yeYST iripo muSUSE Linux Enterprise. Iko kune zvinopfuura mazana matanhatu zvigadziriso zvichienzaniswa neshanduro iriko mune yakavhurikaSUSE 600.
Kubatanidzwa kweMishini: michini iri rairo yekushandisa tambo yakanangidzirwa kune sysadmins. Inobvumira kugadzirwa kwe tsananguro nezve iyo Linux system uye ita kufananidza pakati penyika dzakasiyana kana dzakasiyana Linux zviitiko. Nenzira imwecheteyo, iyo inobvumidza kuburitswa kweiyi rondedzero kuti gare gare ishandise mukudzokorora, kutama kana kuita maturusi mu Cloud.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » OpenSUSE Leap 42.1: Iyo Yekutanga "Mbeu dzakauchikwa" Kugovaniswa
Jorge P akadaro
kudhawunirodha kuyedza 😀
Pindura Jorge P
RODOLFO TORRES akadaro
Ini ndoda kurodha pasi ndapota iyi windows ibwe
Pindura RODOLFO TORRES
Alejandro TorMar akadaro
Nezuro ndakashanda neWindows 7 uye pese pandinoshanda neiyo OS zvinondipa matambudziko mazhinji nevatyairi ... Chinhu chete chakandiponesa mawindows 10
Pindura kuna Alejandro TorMar
"Iyi Windows"? XD zvirinani kwete kurodha chero chinhu chinoita senge hauna zano ... kana kwete hahaha
Iyo GNU / Linux inoshanda sisitimu kwete Windows, asi hapana chinoitika, chinhu chakanaka nezvezvimwe zvinogoverwa zveGNU / Linux ndezvekuti iwe unogona kuzvimhanya kubva paCD / DVD kana USB uye wozviedza pasina kana kuzviisa, tora izvi pamwe iwe Unobatsira : https://es.opensuse.org/SDB:Instalar_openSUSE_sin_CD_ni_DVD
Iyi vhezheni yaitaridzika kunge yakanaka kwazvo kudesktop, asi kubva pane zvandaigona kuona; nvidia uye opensuse hazviwirirane zvakanyanya.
Huya, mushure mekuimisa yakaomeswa nechando nevatyairi veNewuau, mushure mekutanga patsva mu sfemode nekuisa nvida zvaitaridza kuti zvese zvaienda nani asi zvainge zvisiri. Saka ndakafunga kuti pamwe yaive plasma5 uye nekuda kwechikonzero icho yakachinja kuita gnome asi zvakafanana.
Ichadzoserwa kune laptop ine Intel mifananidzo kuti uone kana izvi zvisingakundikane ini.!
Maitiro ekuisa Sublime Chinyorwa 3 mune yakavhurikaSUSE
Fedora vhezheni 23 iri pano!